nanoe™ နည်းပညာ - Panasonic
တီထွင်ဖန်တီးမှု ရာစုတစ်ခု မွေးဖွားခြင်း
Panasonic ၏ nanoe™ နည်းပညာသည် nanoe™၊ nanoe™ X နှင့် nanoe-G တို့ပါဝင်သည့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသော လေသန့်စင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အနံ့အသက်ပျောက်စေပြီး ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများ ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားပေးကာ ဖုန်များဖယ်ရှားပေးရာတွင် ထိရောက်သဖြင့် အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုလတ်ဆတ် သန့်ရှင်းစေပြီး သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် သင့်အိမ်တွင်းကို လန်းဆန်းသန့်ရှင်းစေပါသည်။
nanoe™ နည်းပညာ သမိုင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုမှုများကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
nanoe™၊ nanoe™X နှင့် nanoe-G တို့၏ ခြားနားချက်
အဓိက အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အရွယ်အစား
အရာ5မျိုးကို ဟန့်တားပေးသည်
(ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများ၊ မှို၊ ဓာတ်မတည့်စေသည့် ပစ္စည်းများ၊ ဝတ်မှုန်များ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် အရာဝတ္ထုများ
nanoe™ နှင့် nanoe™ X ကြား
စွဲနေသော အနံ့များကို ဖယ်ရှားပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ နာနိုထုတ်ကုန်အားလုံးရှိ nanoe™ အမှုန်များသည် ရေနွေးငွေ့အမှုန်များထက် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး အမျှင်များ၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး အပိုင်းများထဲအထိ ထိုးဖောက်ကာ အနံ့အသက်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ OH ရေဒီကယ်များသည် အနံ့ထွက်ပေါ်ရာ ရင်းမြစ်များထဲသို့ ရောက်ရှိပြီး အနံ့များကို သိသိသာသာ မရရှိတော့သည်အထိ လျော့ပါးအောင် ပြုလုပ်လိုက်သည်။
nanoe™ လေအေးပေးစက်များဖြင့် အနံ့အသက် ဖယ်ရှားလိုက်ပါ
ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဟန့်တားပေးသည်
nanoe™ သည် လေထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားနှင့် ရောဂါပိုးမွှားများကို လွှမ်းခြုံရစ်ပတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဟန့်တားပေးသည်။ OH ရေဒီကယ်များသည် ၎င်းတို့ထံ ရောက်ရှိသွားပြီးနောက် ရောဂါပိုးမွှားများပရိုတင်းများကို အသွင်ပြောင်းကာ ဟန့်တားလိုက်သည်။
nanoe™ လေသန့်စင်စက်များဖြင့် ၎င်းတို့ကို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားပေးသည်
ဆံပင်၊ အသားအရေနှင့် ဦးရေပြားတို့ကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည်
nanoe™ X တွင် အသားအရေကို ချောမွေ့စေပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့် သဘာဝဖယောင်းပစ္စည်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် nanoe™ တွင် တွေ့ရသည့် ကြွယ်ဝသော အစိုဓာတ်သည် ဆံပင်ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ဆံသားကို ပိုမိုဖြောင့်စင်း တောက်ပစေသည်။
nanoe™ ဆံပင် လေမှုတ်စက်များဖြင့် အစိုဓာတ်ပေးလိုက်ပါ
ထိရောက်စွာ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း (PM2.5)
nanoe-G သည် PM2.5 လောက် သေးငယ်သော ဖုန်မှုန့်များကို အမလျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြည့်သွင်းပြီး ၎င်းတို့ကိုဖမ်းယူသည်။ လေအေးပေးစက်သည် စုပ်ယူသည့် လေစီးကြောင်းကို အသုံးပြုကာ ဖုန်မှုန့်များကို ဆွဲယူပြီး လေစစ်စက်ထဲသို့ထည့်သည်။ လေအေးပေးစက် ဖွင့်ထားသရွေ့ အခန်းထဲရှိလေကို အဆက်မပြတ် သန့်စင်ပေးသည်။
nanoe™ လေအေးပေးစက်များဖြင့် ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ
nanoe™ နည်းပညာသည် အမျိုးမျိုးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ပြီး သင့်အိမ်ကို 24 နာရီ7ရက်လုံးလုံး သန့်ရှင်းလန်းဆန်းစေကာ လူနေမှုဘဝအဆင့်ကို မြင့်မားစေသည်။ သင့်ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ စာကြည့်ခန်းနှင့် အလှပြင်ခန်းတို့တွင် nanoe™ အား အသုံးပြုပုံကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါ။
သင့်အခန်း၏ လေအရည်အသွေးကို မည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကို လေ့လာလိုက်ပါ
The eﬀects of nanoe™ Technology:
နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များ ပြောကြသည်မှာ
nanoe™ နည်းပညာ၏ အစွမ်းများကို နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပညာရှင်များက အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။
1. Prof. Masafumi Mukamoto
Osaka Prefecture တက္ကသိုလ်၊
တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ သုတေသန
အလွန်သန့်ရှင်းမှုကို လိုအပ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကဲ့သို့ နေရာမျိုးတွင် အသုံးပြုရန် Osaka Prefecture တက္ကသိုလ်မှ Prof. Masafumi Mukamoto ၏ ထောက်ခံချက်ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
2. Prof. Masahiro Sakaguchi
Azabu တိရစ္ဆာန်ကု တက္ကသိုလ်ကျောင်း၊
၎င်းက ပန်းနာရင်ကြပ် သို့မဟုတ် အရေပြားရောဂါ ရှိနေသူများအတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိသည့် နေရာများ ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော Azabu တိရစ္ဆာန်ကု တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ Prof. Masahiro Sakaguchi ၏ ပြောဆိုချက်ကို ကြည့်ရှုပါ။
nanoe™ နည်းပညာအကြောင်း နောက်ထပ်လေ့လာရန်
စမ်းသပ်ချက် ရလဒ်များအရ nanoe™ X သည် အိမ်များတွင် အတွေ့များသော အောက်ပါမှိုအမျိုးအစားများ ပေါက်ဖွားမှုကို ဟန့်တားရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ကြပ်ခိုးမှို၊ အသီးအရွက်မှို၊ ပင်နီဆလင်မှို၊ စပိုးမှို၊ သီးနှံဖျက်မှို၊ ရေနေမှို၊ မှိုဖြူနှင့် မှိုနက်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ လေပြွန်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs206/en/
ရှိသမျှ အချက်အလက်များကို ကိုးကားပြီး အထက်ပါ ညွှန်ပြချက်များနှင့် ဖော်ပြချက်များကို ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
<ဆေးလိပ်နံ့> <nanoe™ X> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင် အနံ့ပြင်းအားစကေး အဆင့်ခြောက်ခုကို သုံး၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည် [အနံ့အသက်ဖယ်ရှားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] စီးကရက် မီးခိုးနံ့စွဲနေသည့် မျက်နှာပြင် [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] အနံ့ပြင်းအားကို 12 မိနစ်အတွင်း 2.4 ပမာဏအထိ လျှော့ချပေးသည် (4AA33-160615-N04) <nanoe™> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23 m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင် အနံ့ပြင်းအားစကေး အဆင့်ခြောက်ခုကို သုံး၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည် [အနံ့အသက်ဖယ်ရှားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] စီးကရက် မီးခိုးနံ့စွဲနေသည့် မျက်နှာပြင် [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] အနံ့ပြင်းအားကို2နာရီအတွင်း 1.2 ပမာဏအထိ လျှော့ချပေးသည် (BAA33-130125-D01)<လေထဲရှိ ဘက်တီးရီးယား> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Kitasato သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သုတေသနစင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 25m³ အရွယ်အစားရှိသော လေလုံစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီးနောက် ရှိနေသည့် ဘက်တီးရီးယား အရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း [စမ်းသပ်သည့်ပစ္စည်း] လေထဲရှိ ဘက်တီးရီးယား [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်]4နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99.7% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (24_0301_1)<ကပ်တွယ်နေသော ဘက်တီးရီးယားများ> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Kitasato သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သုတေသနစင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 1m³ အရွယ်အစားရှိသော လေလုံစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီးနောက် ရှိနေသည့် ဘက်တီးရီးယား အရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်း [စမ်းသပ်သည့်ပစ္စည်း] ကပ်တွယ်နေသော ဘက်တီးရီးယား [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 24 နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99.7% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (20_0154_2) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီကို ဘက်တီးရီးယား တစ်မျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။<လေထဲရှိ မှို> [စမ်းသပ်ခြင်း] <လေထဲရှိ ရောဂါပိုးမွှားများ> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Kitasato သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သုတေသနစင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 25m³ အရွယ်အစားရှိသည့် လေလုံစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီးနောက် ရှိနေသည့် ရောဂါပိုးမွှား အရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့်ပစ္စည်း] လေထဲရှိ ရောဂါပိုးမွှား [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်]6နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99.7% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (24_0300_1) <ကပ်တွယ်နေသည့် ရောဂါပိုးမွှား> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Kitasato သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သုတေသနစင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 1m³ အရွယ်အစားရှိသည့် လေလုံစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီးနောက် ရှိနေသည့် 99.99% ရောဂါပိုးမွှား အရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့်ပစ္စည်း] တွယ်ကပ်နေသည့် ရောဂါပိုးမွှား [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်]2နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99.7% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (21_0084_1) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီကို ရောဂါပိုးမွှား တစ်မျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
<လေထဲရှိမှို> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] ဂျပန် အစားအသောက် သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုအတွင်း အဝတ်တစ်ခု၌ ကပ်တွယ်နေသော မှိုအရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] လေထဲရှိမှို [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 1 နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (205061541-001) <တွယ်ကပ်နေသောမှို> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] ဂျပန်အစားအသောက် သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင် အဝတ်စ၌ ကပ်နေသည့် မှိုများကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ကပ်တွယ်နေသော မှိုများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 8 နာရီအတွင်း ဟန့်တားနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသည် (18077411001-0201) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီကို မှိုတစ်မျိုးစီဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
<nanoe™ X> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြတ်စီး၍ စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည် [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ဓာတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်းများ (Dermatophagoides pteronyssinus (အိမ်တွင်း ဖုန်ထူသော နေရာများတွင် ရှိသည့် ကမျဉ်းကောင်ငယ်လေးများ)၊ Dermatophagoides farina (အရေပြားယားယံစေသည့် ဖုန်မှုန့်)၊ သစ်ကတိုး/တောင်တမာ၊ ကျောက်ပန်းပင်၊ ခြံစိုက်မြက်၊ ရက်ဂ်ဝိဒ် ရေညှိမျိုးနွယ်အပင်တစ်မျိုး၊ အရှေ့အာရှရှိ ဆောင်းရွက်ကြွေပင်၊ ဂျပန်ဘုဇပတ်ပင်အဖြူ၊ အာတီမိဇီးယား ဒေစီမျိုးနွယ်အပင်တစ်မျိုး၊ သံလွင်ပင်၊ ဖယောင်းပန်း၊ ကာဆူရီးနားပင်၊ ငွေရောင်မြက်၊ တီမိုသီ မြက်၊ ဂျပန် ဗျစ်ပန်း၊ စပိုးမှို၊ အသီးအရွက်မှို၊ မှက်ခရုမှို၊ မှိုစွဲဝက်ခြံ၊ ပိုးဟပ်၊ ပိုးဖလံ၊ ခွေး (ခွေးမွေး)၊ ကြောင် (ကြောင်မွေး))
[စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 24 နာရီအတွင်း ဟန့်တားပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသည် (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601- F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)
<nanoe™> <ခွေးနှင့် ကြောင်မှ ရရှိသည့် ဓာတ်မတည့်စေသောပစ္စည်းများ> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] တိုကျို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဓာတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်းများ လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်း [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] 45L လေလုံဘူးတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီး ELISA နည်းလမ်းသုံး၍ တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ခွေးနှင့် ကြောင်မှ ရရှိသည့် ဓာတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်းများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] <ခွေး (ခွေးမွေး)> 1 နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 99% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (11M-RPTAPRO47_1) <ကြောင် (ကြောင်မွေး)>2နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 98% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (11M-RPTAPR051_1) <ကမျဉ်းနီကောင် ချေးများ/အကောင်အသေများ> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသော စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် ELISA နည်းလမ်းသုံး၍ အဝတ်တစ်ခု၌ ကပ်တွယ်နေသည့် ဓာတ်မတည့်စေသောပစ္စည်းများကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ကပ်တွယ်နေသော ကမျဉ်းနီကောင်၏ ဓာတ်မတည့်စေသောပစ္စည်းများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 24 နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 60% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (BAA33-130304-F04) <မှိုမှ ရရှိသော ဓာတ်မတည့်စေသည့် ပစ္စည်းများ> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] တိုကျို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဓာတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်းများ လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်း [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] 45L လေလုံအခန်းတစ်ခုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေပြီး ELISA နည်းလမ်းသုံး၍ တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] မှိုမှရရှိသည့် ဓာတ်မတည့်စေသောပစ္စည်းများ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်]2နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 93% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (11M-RPTMAR076_1) <ဝတ်မှုန်> သစ်ကတိုး/တောင်တမာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသော စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် ELISA နည်းလမ်းသုံး၍ အဝတ်တစ်ခု၌ ကပ်တွယ်နေသော ဓာတ်မတည့်စေသည့်ပစ္စည်းများကို တိုင်းတာခြင်း [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] သစ်ကတိုး/တောင်တမာ ဝတ်မှုန် [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 8 နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး 88% အထိ ဟန့်တားပေးသည် (BAA33-130304-F01) ကျောက်ပန်းပင်၊ ခြံစိုက်မြက်၊ ရက်ဂ်ဝိဒ် ရေညှိမျိုးနွယ်အပင်တစ်မျိုး [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] ခန့်မှန်းခြေ 23m³ အရွယ်အစားရှိသည့် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုထဲတွင် လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြတ်စီး၍ စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းကို သုံးပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည် [ဟန့်တားသည့် နည်းလမ်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ကျောက်ပန်းပင် ဝတ်မှုန်၊ ခြံစိုက်မြက် ဝတ်မှုန်၊ ရက်ဂ်ဝိဒ် ရေညှိမျိုးနွယ်အပင်တစ်မျိုး၏ ဝတ်မှုန် [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] 24 နာရီအတွင်း ဟန့်တားပေးသည့် ရလဒ်ကို အတည်ပြုခဲ့သည် (1V332-171010-F04၊ 1V332-171010-F02၊ 1V332-171010-F01)
<အသားအရေ> <nanoe™ X> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] အနားယူသည့် ကာလ- 90 မိနစ်၊ nanoe™ နှင့် ထိတွေ့ချိန်- 60 မိနစ်၊ ထိန်းသိမ်းထားချိန်- 60 မိနစ်။ အသက် 30~49 နှစ်ကြား ခြောက်သွေ့ အသားအရေနှင့် ပုံမှန်အသားအရေ ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီး 8 ဦး။ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းဆတွင် အသားအရေ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် 30% မှ 50% အထိ ပြောင်းလဲသွားပြီး ယင်းသည် 20 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခြင်းနှင့် ညီမျှသည် (USG-KT-14K-012-TM) <nanoe™> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းနှင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်] ခန့်မှန်းခြေ 34m³ အရွယ်အစားရှိ၍ အခန်းအပူချိန် 23 ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်၊ စိုထိုင်းဆ 30% ရှိသော စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် စိုပြည်သော အသားအရေမှ ခြောက်သွေ့သော အသားအရေ အသားအရေ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးရှိသော အသက် 30~49 ကြား အမျိုးသမီး 8 ဦးကို အခန်းတွင်းဖွင့်ထားသည့် nanoe™ ထုတ်ပေးသော စက်တစ်ခုဖြင့် မိနစ် 90 ကြာ ထိတွေ့၍ အနားမယူမီနှင့် အနားယူပြီးနောက် ပြောင်းလဲမှု၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို ရှာရန် အရေပြား အပြင်ဆုံးအလွှာတွင် ရေဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းကို တိုင်းတာခဲ့သည်။ (D01-071219F-01)
<ဆံသား> [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် အဖွဲ့အစည်း] Panasonic ထုတ်ကုန် ဆန်းစစ်လေ့လာမှု စင်တာ [စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း] ခန့်မှန်းခြေ 46m³ အရွယ်အစားရှိပြီး အခန်းတွင်းအပူချိန် 25 ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်၊ စိုထိုင်းဆ 40% ရှိသော စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုတွင်။ nanoe™ ထုတ်ပေးသော စက်တစ်ခု၏ 2m အကွာတွင် ဆံပင်စည်း (6 စည်း) ကို တွဲလောင်းချထား၍ nanoe™ ထုတ်ပေးသော စက်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖွင့်၍ လည်ပတ်စေခြင်း- 8 နာရီဖွင့်၍ 16 နာရီပိတ်ထားပါ။ [ပြုလုပ်နည်း] nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်း [စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း] ဆံသား [စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုရလဒ်] <nanoe™ X> (USD-KS-15S-009-TM), <nanoe™> (D01-091005-01TM)
အနံ့ဖျောက်ပေးနိုင်စွမ်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် (အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းမှု)၊ ဖွင့်ထားချိန်၊ အနံ့နှင့် အမျှင်အမျိုးအစားများကိုလိုက်၍ ကွဲပြားမှု ရှိသည်။ ၎င်းသည် စီးကရက်များတွင်ပါဝင်သော အဆိပ်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းများ (ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုက်ဒ် စသည်) ကို ဖယ်ရှားမပေးပါ။ အဆက်မပြတ် ထွက်နေသည့် အနံ့အသက်များ (ဥပမာ- အဆောက်အအုံတွင်သုံးသော သုတ်ဆေးကဲ့သို့ ဆေးအနံ့များနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့များ) ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားမပေးပါ။ အသုံးပြုပုံ၊ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ကွဲပြားမှုများ (အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ) အပေါ် မူတည်၍ ဆံသားရလဒ်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။ nanoe™ X နှင့် nanoe™ တို့က ရောဂါပိုးမွှားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ပေါက်ဖွားမှုကို ဟန့်တားပေးသော်လည်း ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်မပေးပါ။
အသုံးပြုပုံ၊ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုများ (အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ) အပေါ် မူတည်၍ ရလဒ်တစ်ခုချင်းမှာ ကွဲပြားနိုင်သည်။